Qarax lagu soo beegay soo noqoshadda Axmed Madoobe ee Kismaayo | KEYDMEDIA ONLINE
Qarax lagu soo beegay soo noqoshadda Axmed Madoobe ee Kismaayo
Maqaaxidda waxaa lagu beegsadey dad shacab ah, oo ku caweynayay, iyadoo Saraakiisha amniga ay qabteen dhowr qof oo lagu tuhmayo weerarka.
KISMAAYO, Soomaaliya - Ugu yaraan labo qof oo shacab ah ayaa la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen qarax miino oo xalay fiidkii ka dhacay magaaladda Kismaayo, ee xarunga KMG Jubbaland.
Qaraxa oo ahaa miino ayaa ka dhacay gudaha maqaaxi lagu magacaabo "Xeebta Lugaha ii Geli", waxaana dadkii ku dhintay ay ahaayeen dad shacab ah, oo goobta ku caweynayay.
Shan qof oo kale ayaa ku dhaawacmay kuwaasoo la dhigay Isbitaalka magaaladda, sida ay boolisku sheegeen. Waxaan jirin cid sheegatay mas'uuliyadda weerarka illaa hadda.
Qaraxa uu dhacay waxyar kadib markii Kismaayo uu kusoo laabtay Axmed Madoobe, oo mudooyinkii dambe ku maqnaa dalka Kenya, oo ah meesha maamulkiisa laga taageero.
Amniga Kismaayo ma ahan mid wanaagsan, oo la isku halleyn karo, waxaana inta badan ka dhaca qaraxyada iyo dilalka qorsheysan, oo qaarkood la sheegay inay fuliyeen malleeshiyaadka Axmed Madoobe, oo dhibaato badan u geystay shacabka magaaladda tan iyo markii ay qabsadeen 2012.
Axmed Madoobe oo aan degaanka kasoo jeedin ayaa Kismaayo ku qabsadey Taangiga Kenya, isagoo dilay cid kasta oo kasoo horjeeday Maamulkiisa, waxaana magaalada ka cararay odayaal iyo ganacsato badan oo naftooda u baqay.
Kismaayo waa meesha kaliya uu si buuxda Axmed Madoobe uga taliyo Jubbaland oo dhan, Gedo iyo Jubbaland Hoose gacantiisa wali ma gaarin, iyadoo Jubbada Hoose qeybo kamid ah Al-Shabaab ku sugan tahay.
0 Comments Topics: jubbaland
Shir laga yeeshay gurmadka abaaraha Jubbaland
Warar 14 October 2021 15:43
Musharax taageero ka heysta Dabageed oo lagu doortay Jowhar
Warar 4 October 2021 19:10